Navigator "Garmin eTreks 10": Ukubuyekeza, Umhlahlandlela
I enhle izivakashi Itilosi okuthiwa "Garmin eTreks 10" baqala umsebenzi wabo siqu emuva ngo-2012 futhi kusukela ngaleso sikhathi iye yazuza inombolo ezanele lezi abalandeli. Of lonke uchungechunge le imodeli hhayi kuphela kwanyatheliswa izinguqulo ezandulele, kodwa namanye abakhiqizi abaningi.
"Garmin eTreks 10"
Nakubukwa jikelele, idivayisi angakutshela eziningi, kodwa thina ukhethe kuphela izici zako ezisemqoka nemisebenzi. Itilosi abahlukile "Garmin eTreks 10" ine kakhulu sici isethi nokwakhiwa ngokwanele eziqinile, futhi okungafanele siyikhohlwe ukutholakala kanye nemibandela yomsebenzi, kakhulu ngendlela amahora 25 obakhathalelayo. Imodeli esisha ukuba ngcono okukhulu kungabonwa esibonakalayo, unezela nebalazwe, Geocaching ngaphandle kwamarekhodi ephepheni.
kukhona futhi processor ngozwelo sezingeni eliphezulu nobuchwepheshe ukwahlukahlukana. Sam Itilosi uyakwazi ukucacisa indawo umnikazi ngokushesha futhi kahle impela. Isekela zokuxhumana nge-satellite esithile, ngakho ngisho nasehlane kwamahlathi, emihosheni noma eduze izakhiwo abade isiginali izonqunywa ngokunemba ezinhle.
Entsha "Garmin eTreks 10" ine omuhle kakhulu Izibuyekezo sibonga kalula yayo ukusetshenziswa kanye isikhombikubona elula, kufinyeleleke kuwo wonke umuntu. Ubukhulu sekukonke zedivayisi ezincane ngokwanele, ngakho ephaketheni lakho ke kungenziwa igqoke ngokuphelele kunoma iyiphi iphuzu. Futhi, ukwakhiwa kwezindlu ngokwayo kude ezithile futhi protuberances, ezisiza ukwakha induduzo ngesikhathi lapho umuntu ophethe ke esandleni sakhe.
Idivayisi ifakwe imodeli entsha ukubonisa, elibonisa isithombe kujabulise bezibona ezibukwayo. Kasibili yimiphi imibandela ukukhanya akazange akuvimbele ukukhandwa ukugqama nokucacisa.
ukubekwa okungahleliwe emanzini kuze kuphele isigamu sehora noma ngaphezudlwana ngeke sibe sibi umsebenzi wakhe, futhi bonke isikhathi esichithwa ohlelweni ketshezi akumvimbi. A amandla okuyinto gqamisa umenzi, zivikela kwema- uthuli, ukungcola kanye umswakama izingxenye zangaphakathi.
plus ezinhle kakhulu kuleli 'Garmin eTreks 10 "kuyinto anakho ukusekelwa yibo bonke Geocaching GPX-amafayela. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukulanda izinqolobane ehlukahlukene kuzo zonke izindawo, kanye izincazelo zabo ngqo kudivayisi.
Izinzwa Special linamathele isiphequluli, esitolo kanye ukukhiqiza kabusha masinyane esikrinini lonke ulwazi eyisisekelo isithakazelo umsebenzisi. Kulesi imephu kuhlanganisa wonke amathiphu, incazelo eyinkimbinkimbi, kanye indawo ngqo. Konke lokhu kuzosiza izivakashi abathanda ukuhamba ezindaweni engavamile, ngaphandle kokwazi indlela ngqo.
Ngenxa umsebenzisi geocaching azilahle ngamabomu amarekhodi ephepheni ethafeni, ngaleyondlela kulondolozwa imvelo. Futhi ngesikhathi esifanayo geocaching kahle kakhulu anda, futhi ikuvumela ukuba ngcono ukusebenza.
Itilosi ephathekayo model entsha ebizwa ngokuthi "Garmin eTreks 10" yakhelwe ukusetshenziswa jikelele. Umzimba womuntu ungakwazi kanyekanye kokuthola izimpawu kanye kusuka kumasathalayithi GPS, "Glonass" (uhlelo Russian). Entsha uhlelo Russian uthola isikhathi into 20% ngokushesha kunokuba indinganiso kohlelo lamazwe omhlaba.
Phakathi nokusebenzisa izinhlelo ezimbili amasignali ndawonye wathola bayanda ukuba 24, njengoba kuqhathaniswa kuphela ohlelweni GPS.
Excellent imodeli idivayisi has a isibonisi ngombala omnyama nomhlophe kanye 2.2 amayintshi, futhi isinqumo esihle. Navigator "Garmin eTreks 10" ilawulwa a induku yokudlala kanye ezimbalwa, okuyinto zitholakala eziseceleni.
Imemori yokuhlala mayelana 1,000 zendlela esibekiwe, noma ngesandla noma ngokuzenzakalelayo. Ngaphezu kwalokho, idivayisi has a Ukuvikelwa esitebeleni yokulwa umswakama, kanye touch okhiye kanye ne-port Imigudu.
Monochrome Uhlobo lokuboniswa ephezulu ukuzwela umamukeli bese unikeza umsebenzi omuhle kakhulu ngaphandle amaphutha kanye noma yikuphi ukuphazamiseka. Amandla wumnikezeli usebenzisa i-pair yama-AA amabhethri.
Eqinisweni, esikhathini 'Garmin eTreks 10 "imfundo ilula ngempela ukuqonda, khona kungadingeki noma yimaphi amakhono akhethekile. Udinga nje ulandele igxathu negxathu izenzo, enamathiselwe ngedivayisi noma okukuyi-Internet. Ngamagama eziyisisekelo, odinga ukukwazi labo kuphela amaqiniso isethaphu:
Ukuhlela imenyu enkulu ufuna ukulungisa ngqa. Lokhu kwenziwa ngokucindezela inkinobho "Imenyu", bese ukuthola into oyifunayo.
Isinyathelo sesibili kudingeka ukuthi lilungise ukufinyelela Amakhasi. Emva ukuhleleka kuka imenyu udinga ucindezele inkinobho "emuva" bese ufaka kuzilungiselelo evamile. Kukhona liyadingeka ukuze ukhethe ukulandelana Amakhasi njengoba oyifunayo. Khumbula ukuthi kuzonyamalala kwimenyu enkulu.
Amasimu idatha baguqulelwa ngumsebenzisi. Lokhu kwenziwa impela nje. Udinga nje kuphela ukuthola inkinobho "Imenyu" bese uchofoza "Shintsha Idatha Fields". Lokhu kwenziwa kakhulu kuyaqabukela, ngoba Ungasingenisi okuningi okuhle.
Kulesi imodeli, etholakalayo kakhulu ngendlela 4 sephrofayela, futhi ungashintsha ukuthi izilungiselelo kwimenyu enkulu. Umsebenzisi unikezwe lezi zinhlobo: geocaching, ukuzilibazisa, ukuqina kanye zasolwandle.
Ngaphezu kwalezi Amasimu, ungakwazi kuphela oyifisayo yamathuluzi, ke kuyoba lula kakhulu. Lokhu panel azoboniswa ekhadini ngalinye. Lapha udinga ukungena kwe "Main Menu" nokushintsha yamathuluzi. Ukuze wenze izinguquko ibalazwe kudingeka ukuya "Imenyu" evamile, bese ulandela lendlela: Ifaka ikhadi-Data Field yamathuluzi. Le ndlela kuyinto ezithakazelisa kakhulu futhi elula kuqhathaniswa Amasimu ezivamile.
Yiqiniso, itilosi "Garmin eTreks 10" has Izibuyekezo omuhle kakhulu kunangomisiwe ezimbi. ikhasimende ukungeneliseki kuvetwa kuphela ukungabi khona amakhadi efakwe bese uvala induku yokudlala.
Kodwa naphezu kwalokhu, izinzuzo zalesi imodeli kakhulu ngaphezulu. Idivayisi kuyinto compact futhi ayinikeze ukungakhululeki uma usuka kwelinye iphuzu eya ehlukile ngokuphelele. Izilungiselelo zilula futhi kucace kuwo wonke umuntu, akukho migomo arcane nemisebenzi usithe. Impilo yebhethri abakwazi kodwa jabulani, ngoba imodeli izivakashi Kungcono kakhulu.
Eshibhile futhi angabacwasi lula ukusebenzisa okukhethwa kukho futhi kungenzeka ukujabulisa ifomu ukuphathwa impahla amabhethri kanye ukunemba umzila. Baningi abantu bayajabula ukuthi oyithengile itilosi ukuthi akasoze ahluleka.
Kuyini i-EcoPhone? UVeneer noma i-eco-shpon - okungcono?
Uyazazi indlela ukubeka ucwecwe eziphuma kuso?
Ukufakwa Ukushisa ipayipi endlini yangasese
Hairpin "Easy Ikhaya" - kwekhanda yasekuqaleni kulula futhi okusheshayo!
Izicelo zoNyaka Omusha
Umhlahlandlela kanye yokubeka for sokuprakthiza